FITSENANA NY TAONA VAOVAO : Hetsika maro no nisy tao an-tampon-tanànan’i Sambava
Na saika nitovitovy avokoa aza tamin’ny ankapobeny ny fanamarihana isam-paritra ny fetin’ny faran’ny taona ny alahady lasa teo, dia nisy hatrany nampiavaka izany ho an’ireo faritra sy distrika tsirairay. 1er janvier 2018
Raha ho an’ny distrikan’i Sambava manokana izao dia hetsika maro samihafa no hita tao an-tampon-tanàna. Dihy sy horakora-pifaliana mantsy tamin’ny ankapobeny no nandraisan’ny mponina ny taona vaovao, isan’izany ny tao amin’ny “hotel restaurant Le Capricorne”. Re nanakoako eran’ny tanàna ihany koa ny anjomaran’ireo fiangonana maro samihafa izay namparesaka ny tanàna, araka ny fanadihadiana. Tsy vitsy ihany koa ireo namonjy toeram-pilanonana niaraka tamin’ny fianakaviana. Ankoatra ireo dia toerana maro ihany koa no nahitana alim-pandihizana tao Sambava, isan’izany ny tao amin’ny Tranompokonolona.
Etsy andaniny dia nisy ireo teratany vahiny any an-toerana izay nivondrona tamin’ny toerana iray mba hiara-paly tamin’iny fetin’ny faran’ny taona, singanina manokana amin’izany ireo teratany sinoa. Etsy ankilany dia nanana ny lanonany manokana ihany koa ireo mpandraharaha mahakasika ny vokatra lavanila mba hitsenana ny taona 2018. Araka ny fantatra dia maro ihany koa ireo vondron’olona isaky ny fokontany izay niray hina ka nanao lanonana madinidinika tany anivon’ny faritra misy ny tsirairay ihany.
Nandritra izany hetsika rehetra izany dia tsy nandry mandra-maraina ny polisim-pirenena nitandro ny filaminana. Amin’ny ankapobeny dia nilamina tanteraka ny fety tao amin’ny renivohitry ny faritra Sava.
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (295) 14 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (170) 17 janvier 2019 Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA (76) 20 janvier 2019 Tafakatra sivy ireo olona namoy ny ainy MAHAMASINA - FIHOTSAHANA TRANO (69) 20 janvier 2019 Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO (53) 20 janvier 2019 Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA (50) 20 janvier 2019